नेपाल एयरलाईन्सको बिमानबाट बिहीबार १४ जना यात्रुले उडान भरे ! – ebaglung.com
नेपाल एयरलाईन्सको बिमानबाट बिहीबार १४ जना यात्रुले उडान भरे !
२०७५ असार १४, बिहीबार २०:३९	Top News, थप समाचार
कुसुम थिङ, बागलुङ २०७५ असार १४ । नियमित उडानमा काठमाडौ देखी ५ जना यात्रुहरु लिएर बलेवा अवतरण गरेकोे नेपाल एयरलाईन्सले बलेवाबाट ९ जना यात्रुलाई लिएर गएको छ । गत आईतबारको तारा एयरको उडान भने काठमाडौबाट आउने १ जना र बलेवाबाट जाने ३ जनामात्र यात्रु भएपछी उडान रद्द गरिएको बताईएको छ ।
दुबैतर्फको उडानमा गरी न्यूनतम २४ यात्रुहरु आवश्यक पर्नेमा आजको उडानमा १४ जना यात्रुहरुले उडान भरेका छन् । नपुग १० जना यात्रुको जनही रु ५ हजार ५ सयले रु ५५ हजार बागलुङ नगरपालिकाकाले नेपाल एयरलाई हर्जाना दिनुपर्ने भएको छ ।
ताराको भन्दा नेपाल एयरको यात्रु भाडा रु १ हजार भन्दा बढी सस्तो भएकोले नेपाल एयरमा औसत बढी यात्रुहरुले उडान भर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यहि असार ११ गते सम्पन्न बागलुङ नगरपालिकाको नगरसभामा नगरपालिका तर्फबाट दुई विमान कम्पनीहरु संग नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले गरेको त्रिपक्षीय संझौता र हाल सम्म बिमान कम्पनीहरुलाई नगरपालिकाले तिर्नु परेको हर्जाना रकम बारे केहि नबोले पछी उनको व्यापक बिरोध भएको छ ।
बृक्षारोपण दिवसमा इलाका वन कार्यलय कुस्मीसेराव्दारा दमेकमा बृक्षारोपण
अनुत्पादक रुखहरु हटाई उन्नत जातका, बढी र छिटो आम्दानी हुने खालका विरुवाहरु रोप्न नगरप्रमुखको सल्लाह !